Manchester-Boston Airport uye Myrtle Beach nendege paMweya Airlines izvozvi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Manchester-Boston Airport uye Myrtle Beach nendege paMweya Airlines izvozvi
Myrtle Beach, yekuwedzera nyowani yeMweya Airlines, inoratidza nguva yekutanga MHT kuve nendege isingamire kuenda kudunhu reSouth Carolina.
Spirit Airlines ndiyo yekutanga nendege nyowani paMHT mumakore gumi nemanomwe uye inoratidza nguva inonakidza yekuwedzera yeMHT.
Kushanda kweMweya kusingamiri kuFort Lauderdale / Hollywood International Airport (FLL) uye Orlando International Airport (MCO) kubva kuMHT kwatanga nhasi.
Mumavhiki matanhatu chete, basa reMweya risingamiri kuSouthwest Florida International Airport muFort Myers (RSW) neTampa International Airport (TPA) ichatanga munaNovember 17 na18, zvichiteerana.
Ndege dzeMweya Airlines dzakabatwa pasi Manchester-Boston Dunhu Airport (MHT) kekutanga nhasi sezvo Airport yakapemberera kuuya kwevatakuri vatsva. Ndege yakaunza zvimwe zvinonakidza nhau navo, ichizivisa kuwedzerwa kwenzira yemwaka, isingamire kuenda kuMyrtle Beach International Airport (MYR) kutanga Kubvumbi 20, 2022.
"Manchester-Boston Dunhu Airport zviri mumweya kupemberera nhasi! ” akadaro Airport Director Ted Kitchens, AAE "Tinoda kugamuchira nekutenda shamwari yedu nyowani yendege, Spirit Airlines, yekuunza sevhisi nyowani kubva kuMHT kuenda kunzvimbo ina dzakakurumbira dzeFlorida uye nebasa idzva kuMyrtle Beach, South Carolina. Uye kune vese vatinofamba navo vari kubhururuka nendege yekutanga yaMweya nhasi - makorokoto nekuve chikamu cheKugadzira Nhoroondo Nhasi! ”
Spirit Airlines ndiyo yekutanga ndege nyowani paMHT mumakore gumi nemanomwe uye inoratidza nguva inonakidza yekuwedzera yeMHT. Myrtle Beach, yavo nyowani yekuwedzera, inoratidza nguva yekutanga MHT kuve nendege isingamire kuenda kudunhu reSouth Carolina.
"Kunzwa kukuru kugona kuunza More Go uye kuzivisa basa rakawedzerwa paZuva Rekutanga," akadaro Lania Rittenhouse, Mutevedzeri weMutungamiri weMweya weGuest Experience & Brand, uye Mutungamiri weMweya Charitable Foundation. “Mufaro wakazara kushandira MHT. Tinoona mikana mikuru uye tinoshuvira kuratidza vaenzi vedu veNew Hampshire kuti sei Mweya uri kukosha kwakanyanya mudenga. ”
Kushanda kweMweya kusingamiri kuFort Lauderdale / Hollywood International Airport (FLL) uye Orlando International Airport (MCO) kubva kuMHT kwatanga nhasi. Mumavhiki matanhatu chete, basa reMweya risingamire kuSouthwest Florida International Airport muFort Myers (RSW) neTampa International Airport (TPA) ichatanga munaNovember 17 na18, zvichiteerana.
"Spirit Airlines iri kuunza vagari vemuNew Hampshire izvo chaizvo zvavakakumbira - dzimwe nzvimbo dzisingamire nemitengo inodhura, "akadaro Gavhuna weNew Hampshire Chris Sununu. “Nekuda kwekudyidzana uku kunofadza, isu zvino tave — kekutanga nguva dzese — nendege isingamire kubva kuNew Hampshire ichienda kuSouth Carolina. Mukana wakanaka weGranite State! ”
MHT neMweya vakatanga vazivisa mutakuri mutsva uye nendege munaJune 16, 2021.